वाथ जोर्नी दुख्ने रोग र यसको सफल उपचार Nepalpatra
आजकाल प्राय हरेक घरमा जोयन्ट पेन (जोर्नी दुख्ने) रोग धेरै देख्न सकिन्छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बाथ भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । आजको लेखमा जोर्नी दुख्ने रोगको बारेमा प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु । बाथ रोग किन लाग्छ ? भन्ने प्रश्न सोध्न मन लाग्नु स्वाभाविक हो । यो रोग खास गरी युरिक एसिड बढ्न गएमा हुने गर्दछ ।
साधारणतया सबैजसो जोर्नी दुखाइलाई हामी बोलीचालीको भाषामा बाथ रोग भनेर चिन्दछौं । के बाथ रोग जोर्नीको दुखाईलाई मात्र भनिन्छ त ? मान्छेलाई बाथ रोग किन हुन्छ ? बाथ रोगका लक्षणहरु के-के हुन् ? कसले र कहाँ यसको उपचार गर्ने ? जस्ता जिज्ञासा सबैको मनमा उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
अर्कोतिर बिरामीलाई औषधिबारे राम्रोसँग जानकारी गराउने फुर्सद हामीमध्ये कमै डाक्टरलाई मात्र हुँदो हो । त्यसैले यहाँ सरल भाषामा बाथ रोगबारे राम्रो जानकारी दिने कोशिश गरेको छु । बाथ रोगको लक्षण, उपचार र औषधिबारे पनि जानकारी पस्कनेछु ।
बाथ रोग नसर्ने प्रकृतिको दीर्घ रोग हो । यो रोगको औषधि बाँचुन्जेल सेवन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । धेरैजसो बाथरोग औषधि सेवन गरुन्जेल निको भएजस्तो हुने तर औषधि सेवन गर्न छाडेपछि फेरि बल्झने खालका हुन्छन् । समयमा उपचार नपाउँदा बाथ रोग मृत्युको कारण पनि बन्न सक्छ ।
शरीरमा अम्लीय एसिड तत्व बढेर रगतलाई दूषित पार्ने र सोही दूषित रगत युरिक एसिडका रुपमा हात खुट्टा र जोर्निहरुमा प्रवेश गर्दछ । त्यस स्थितिमा जोर्नी सुनिने र दुख्‍ने गर्दछ । जसका कारण ज्वरो आउने पनि गर्छ ।
वाथ रोगका लक्षणहरु
१. विहान उठ्ने बेलामा हात खुट्टा दुख्‍ने ।
२. हात खुट्टाका औंला दुख्ने सुन्‍निने घुँडा दुख्‍ने ।
३. गोली गाँठा र जोर्नीहरु दुख्‍ने सुन्‍नि छालाको रङमा परिवर्तन आउने हुन सक्छ ।
बाथ रोग भएमा के नखाने ?
वाथ रोग हुनेहरुले खानपानमा निकै ख्याल गर्नुपछ भिटामिन ए, डी र इ तत्व पर्याप्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । तर प्रोटिन भएका खानेकुरा खानु हुदैन । जस्तो: टमाटर, पालुग्ङो, तोरीको साग बाथ रोगीका हानिकारक हुन्छ ।
काचो तरकारीहरुको रस, गाँजर, स्याउ, मौसम, अनार, जस्ता फल खानु उपयोगी मानिन्छ । मद्यपान, धूम्रापान गर्नुहुदैन् । त्यस्तै जंगफुडको प्रयोग पनि गर्नुहुदैन् ।
बाथ रोगको उपचार
१. माहाराश्नादि काढा १५ मिली समभाग पानी मिलाएर दिनमा २ पटक खान दिने ।
२. महायोगराज गुगुग्गुल १ गोली दिनमा २ पटक खान दिने ठिक हुन्छ ।
३. अशोगन्धा क्यापसुल २ क्याप्सुल दिनमा २ पटक खान दिने ।
४. महानारायणको तेल दिनमा २ पटक मालिस गर्ने ।
५. गाइको घीउमा लहसुन फुराएर खाने गर्नाले पनि यो रोगमा राम्रो फाइदा हुन सक्छ ।
नोट : यस्तो समस्या देखिएमा आयुर्वेदिक डाक्टरको परामर्शमा उपचार गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
आधुनिक युगमा मान्छेहरु व्यस्तताको कारण स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसक्दा र खान पान रहन-सहन आचार विचार र जीवन पद्धतिको विकृति हुन